အိမျထောငျကသြှားတဲ့ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ လှခွငျးမလှခွငျးဟာ သူ့အိမျထောငျဖကျအပျေါ အမြားကွီး မူတညျပါတယျ ။ - ONE DAILY MEDIA
အိမျထောငျကသြှားတဲ့ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ လှခွငျးမလှခွငျးဆိုတာ သူ့အိမျထောငျဖကျအပျေါအမြားကွိး မူတညျပါတယျ ။ အိမျထောငျပွုလိုကျတယျဆိုတာ ယောကျြားလေးတဈယောကျအတှကျ ဆေးပေးမီးယူရှာတယျဆိုပမေယျ့ မိနျးကလေးတဈယောကျအတှကျကတြော့ ဘ၀တဈခုလုံးကော စိတျကော အလုံးစုံ နှဈမွုပျပဈလိုကျရတာမြိုးပါ ။ အိမျထောငျစုဇယားမှာ မှီခိုလို့တပျထားပမေယျ့ ဘယျတော့မှ မအားမလပျအောငျ လုပျနရေတာလဲ အမြိုးသမီးတှပေဲ ထမငျးခကျြ မီးပူတိုကျ ကလေးဝယြောဝစ်စအစစအရာရာအကုနျလုံး သူ့ခွသေူ့လကျကွီးပဲလေ ။မငျးဘာလုပျရတာမှတျလို့ဆိုတဲ့ယောကျြားတှကေို တဈရကျလောကျအိမျမှာရှိစခေငျြတယျ ။ ကိုယျတဈနလေုံ့းဘာတှေ လုပျနလေဲဆိုတာ သိစခေငျြ မွငျစခေငျြတယျ ။ ဒါမှ စာနာနားလညျမှာလေ ။
မိနျးကလေးတဈယောကျ ပငျပနျးမှုဒဏျကို မညညျးမညူပဲ သညျးခံနိုငျပါတယျ ဒါပမေယျ့ စိတျပငျပနျးတဲ့ ဒဏျကိုတော့ မိနျးကလေးတှေ မခံနိုငျကွဘူး ။ စိတျပြိုမှ ကိုယျနုတာမြိုး လေ နားလညျမှုမရှိတဲ့ အိမျထောငျရေးတဈခုကို ဆှဲဆနျ့နရေတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ အပူက စိတျမှာတငျမက ရုပျမှာပါ လာထငျတာမြိုး ပတျဝနျးကငျြမှာ တှဖေူ့းကွမှာပါ . . .အိမျထောငျမကခြငျက မငျးသမီးရှုံးအောငျ လှတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျ အိမျထောငျကသြှားပွီးမှ ကိုယျတောငျမနညျးရုပျဖမျးယူရတဲ့သူတှေ ကွုံဖူးတှဖေူ့းကွမှာပါ ။
မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့အလှတရားဟာ စိတျနဲ့ အရမျးဆိုငျတယျလေ ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိနတေဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့မကျြနှာမှာ မိတျကပျတှမေလိမျးထားလဲ သူ့အလိုလိုနရေငျး ကွညျလငျနတောမြိုးပေါ့ ။ ကိုယျ့ဘ၀မှာ ကိုယျပြျောနတေဲ့မိနျးကလေးရဲ့ အပွုံးဟာ ကကျြသရရှေိနတောမြိုးပေါ့ ။ အိမျထောငျကတြဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့လှခွငျးမလှခွငျးဆိုတာတှကေို ဒီအရာတှနေဲ့ တိုငျးပါတယျ ။အဲ့လိုလှနနေိုငျဖို့အဲ့ဒီမိနျးကလေးရဲ့အနောကျမှာ ရိုကျနှကျတတျတဲ့လကျတဈစုံထကျ နားလညျမှုရှိတဲ့လကျတဈစုံ လိုပါတယျ ။ မှားနတေဲ့အခါ အပွဈတငျတတျတဲ့နှုတျခမျးထကျ အမှားပွငျပေးတတျတဲ့ နှုတျခမျးတဈစုံကို လိုပါတယျ ။ အိပျမကျလှလှ မကျနိုငျဖို့အတှကျ . . . စိတျခလြကျခြ အိပျနိုငျလောကျတဲ့ သစ်စာတရားတှရှေိနဖေို့လဲ လိုပါတယျ ။ Beauty saloon တှေ လိုကျပို့ဖို့မလိုဘူး . . .ပငျပနျးနပွေီလား ဆိုတဲ့စကားလုံးခြိုခြိုလေးနဲ့တငျ မိနျးကလေးတဈယောကျကို အလှဆုံး ပွုံးစနေိုငျပါတယျ . . .
ဒီစကာလေးကို စပြီးပြောခဲ့တုန်းက . . . အငြင်းအခုန်တွေ အများကြီးဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ ယောက်ျားလေးတွေဘက်က အများဆုံး ကွန်ပလိန်းတက်ကြတာပါ ။ သူတို့ပြောတာတွေလဲ မှန်သင့်သလောက် မှန်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက မိန်းမသားဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့မိန်းမသားတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို မြင်သာအောင် ပြတာပါ ။
အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ လှခြင်းမလှခြင်းဆိုတာ သူ့အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်အများကြိး မူတည်ပါတယ် ။ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတာ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အတွက် ဆေးပေးမီးယူရှာတယ်ဆိုပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်ကျတော့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကော စိတ်ကော အလုံးစုံ နှစ်မြုပ်ပစ်လိုက်ရတာမျိုးပါ ။ အိမ်ထောင်စုဇယားမှာ မှီခိုလို့တပ်ထားပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မအားမလပ်အောင် လုပ်နေရတာလဲ အမျိုးသမီးတွေပဲ ထမင်းချက် မီးပူတိုက် ကလေးဝေယျာဝစ္စအစစအရာရာအကုန်လုံး သူ့ခြေသူ့လက်ကြီးပဲလေ ။မင်းဘာလုပ်ရတာမှတ်လို့ဆိုတဲ့ယောက်ျားတွေကို တစ်ရက်လောက်အိမ်မှာရှိစေချင်တယ် ။ ကိုယ်တစ်နေ့လုံးဘာတွေ လုပ်နေလဲဆိုတာ သိစေချင် မြင်စေချင်တယ် ။ ဒါမှ စာနာနားလည်မှာလေ ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က … အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အခါ သူ့ကိုယ်သူ ပိုင်တယ်လို့ဘယ်လောက်ပဲပြောပြော တကယ်တမ်းကျတော့ သူ့ကိုယ်သူ မပိုင်တော့ဘူး ကြည့်စရာမျက်နှာတွေ အများကြီးရှိလာပြီလေ . . .အနည်းဆုံးတော့ သူ့ယောက်ျားမျက်နှာ သူပြန်ကြည့်ရတော့မယ် အရင်လို . . . မနက်ခင်းဘက် မိတ်ကပ်လှလှလေးထိုင်ပြင်နေဖို့ထက် မနက်စာကို အချိန်မှီ ပြင်ပေးရတော့မယ် ကလေးတွေ ရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မ တစ်ယောက်ဆိုရင် ပိုလို့တောင် ဆိုးသေးတာပေါ့ . . . ကိုယ့်အတွက် အချိန်ပေးဖို့ထက် ကိုယ့်အိမ်အတွက်အချိန်ပေးဖို့ကို ရွေးရတယ်လေ ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပင်ပန်းမှုဒဏ်ကို မညည်းမညူပဲ သည်းခံနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် စိတ်ပင်ပန်းတဲ့ ဒဏ်ကိုတော့ မိန်းကလေးတွေ မခံနိုင်ကြဘူး ။ စိတ်ပျိုမှ ကိုယ်နုတာမျိုး လေ နားလည်မှုမရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို ဆွဲဆန့်နေရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အပူက စိတ်မှာတင်မက ရုပ်မှာပါ လာထင်တာမျိုး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ဖူးကြမှာပါ . . .အိမ်ထောင်မကျခင်က မင်းသမီးရှုံးအောင် လှတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျသွားပြီးမှ ကိုယ်တောင်မနည်းရုပ်ဖမ်းယူရတဲ့သူတွေ ကြုံဖူးတွေ့ဖူးကြမှာပါ ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အလှတရားဟာ စိတ်နဲ့ အရမ်းဆိုင်တယ်လေ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာမှာ မိတ်ကပ်တွေမလိမ်းထားလဲ သူ့အလိုလိုနေရင်း ကြည်လင်နေတာမျိုးပေါ့ ။ ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကိုယ်ပျော်နေတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ အပြုံးဟာ ကျက်သရေရှိနေတာမျိုးပေါ့ ။ အိမ်ထောင်ကျတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့လှခြင်းမလှခြင်းဆိုတာတွေကို ဒီအရာတွေနဲ့ တိုင်းပါတယ် ။အဲ့လိုလှနေနိုင်ဖို့အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့အနောက်မှာ ရိုက်နှက်တတ်တဲ့လက်တစ်စုံထက် နားလည်မှုရှိတဲ့လက်တစ်စုံ လိုပါတယ် ။ မှားနေတဲ့အခါ အပြစ်တင်တတ်တဲ့နှုတ်ခမ်းထက် အမှားပြင်ပေးတတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံကို လိုပါတယ် ။ အိပ်မက်လှလှ မက်နိုင်ဖို့အတွက် . . . စိတ်ချလက်ချ အိပ်နိုင်လောက်တဲ့ သစ္စာတရားတွေရှိနေဖို့လဲ လိုပါတယ် ။ Beauty saloon တွေ လိုက်ပို့ဖို့မလိုဘူး . . .ပင်ပန်းနေပြီလား ဆိုတဲ့စကားလုံးချိုချိုလေးနဲ့တင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အလှဆုံး ပြုံးစေနိုင်ပါတယ် . . .
မိန်းကလေးတိုင်း . . . .ကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ လက်တစ်စုံမှာ လှနိုင်ကြပါစေ ။